Omume 3 iji belata eriri katrij | Bezzia
Mbelata eriri katalọgụ bụ ihe kachasị mgbagwoju anya ma a bịa n'ịkpụzi ahụ site na mgbatị ahụ, n'agbanyeghị na ọ gaghị ekwe omume. Ihe a maara dị ka eriri karọt, na -ezo aka abụba na -agbakọta n'úkwù na nke na -agbatịkarị ruo n'apata ụkwụ. Nchịkọta abụba a na -abụkarị ụmụ nwanyị karịa na ụmụ nwoke ma nwee njikọ na usoro homonụ nke ịtụrụ ime.
Maka ọtụtụ ụmụ nwanyị, afọ ime na -anọchite anya mgbanwe anụ ahụ dị mkpa, ọ bụghị naanị n'oge ịtụrụ ime, mana gafere nnyefe. Mgbe mgbake nke ime nwa, ọbụlagodi mgbe ị felata nke ukwuu ịtụrụ ime, ihe a na -emekarị bụ ịchọpụta na ahụ agbanweela ma ugbu a enwere abụba achịkọtara, agbatị agbatị ma ọ bụ cellulite ebe ọ na -enweghị nke mbụ.
Ọ bụ ezie na afọ ime abụghị naanị ihe na -ebute mkpokọta abụba nke mmadụ niile maara dị ka eriri karọt. Enwere ihe ndị ọzọ, ụfọdụ metụtara mgbanwe homonụ na ndị ọzọ na -ejikọ naanị na agwa ọjọọ. N'ọnọdụ ọ bụla, iwepụ eriri katrijị dị mkpa, dịka na mpaghara ọ bụla ọzọ ịchọrọ imeziwanye ya, ngwakọta nke cardio, mmega ahụ akọwapụtara na ezigbo nri.
1 Omume a kapịrị ọnụ iji belata eriri katrij
1.1 Barbell azụ squat
1.2 Dumbbell na -ehi ụra
1.3 Akwa mmiri glute
Omume a kapịrị ọnụ iji belata eriri katrij
Dị ka ndị ọkachamara siri kwuo, ọ gaghị ekwe omume iwepu abụba site na mpaghara, ihe kacha mma mgbe ịchọrọ ịrụ ọrụ otu mpaghara bụ ijikọ cardio, nke dị irè n'ezie ịgba abụba abụba n'ozuzu ya, na ọzụzụ ọzụzụ siri ike na mpaghara. rụọ ọrụ. N'okwu a, ọ bụ okwu ibelata abụba dị na eriri kaadị, yabụ anyị ga -emerịrị ya ịhọrọ mmega ahụ na -arụ ọrụ n'ụkwụ gị na glute. Rịba ama mmemme ndị a wee webata ha n'usoro ọzụzụ gị iji belata eriri katọn.
Barbell azụ squat
Squat bụ mmega ahụ kacha mma ịrụ ọrụ ụkwụ na isi. Enwere mmega ahụ dị iche iche ma dabere n'ọkwa ma ọ bụ ihe ejiri mee ya, ị nwere ike rụọ ọrụ n'otu mpaghara ma ọ bụ ọzọ. Maka ikpe dị n'aka, anyị ga -eji mmanya na -eme squat azụ. N'ụlọ ị nwere ike iji osisi pilates ma ọ bụ naanị aziza.
Akụkụ nke ọnọdụ squat amalite, guzoro n'ụkwụ gị dịtụ iche na ụkwụ gị na elu ubu. Jide mmanya n'aka gị ma dọba ya n'azụ isi gị. Mgbe ị na -ehulata ikpere gị ka ị daa, weghachite ikpere gị azụ na ala mgbe ị na -ejide mmanya.
Dumbbell na -ehi ụra
Iji mee mmega ahụ a, ị ga -achọ dumbbells. Banye n'ọnọdụ squat ma jide otu dumbbell n'aka ọ bụla, gbatịa aka gị na n'akụkụ hips gị. Jiri otu ụkwụ gbagọrọ agbagọ ikpereNa ụkwụ a hapụrụ, gbatịkwuo ma ọ bụrụ na ikpere emetụ n'ala. N'ebe a na azụ gị kwụ ọtọ, mee ka ụkwụ gbapụ n'emetụghị aka ugboro ole ị jidere.
Akwa mmiri glute
N'ezie dị ka nwata, ị meela mmega ahụ ọtụtụ oge n'amaghị na ọ bụ ihe kacha mma ị ga -arụ ọrụ n'isi ma belata eriri karọt. Dinara n'azụ gị n'elu akwa, gbuo ụkwụ gị ma debe ụkwụ gị n'ala. Ogwe aka dị na nke a kwesịrị ịdị n'akụkụ hips ma nọrọ n'ala mgbe ị na -emega ahụ.
Ọ bụ naanị mejupụtara ibuli pelvis na idobe ọnọdụ ya maka sekọnd ole na ole. Laghachi na ọnọdụ mbido, zuru ike maka sekọnd ole na ole ma megharịa mmega ahụ. Ọ bụrụ na ị gbakwunye otu eriri na -agbanwe na ụkwụ, ị ga -agbakwunye ike na ịdị irè na ọzụzụ.
Ije ije kwa ụbọchị, ịnya igwe, igwu mmiri ma ọ bụ ịgba egwu bụ mmemme cardio na-ere abụba nke ị nwere ike ime kwa ụbọchị n'amaghị ama. Zere ibi ndụ nke ịnọ otu ebe ma debe ahụ gị ka ọ na -emegharị mgbe niile iji belata ma wepụ abụba, ọ bụghị naanị nke na -agbakọta na eriri katrijị, mana n'ahụ gị niile n'ozuzu ya. Ndụ na -arụsi ọrụ ike bụ ndụ ahụike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Mmega ahụ » Omume 3 iji belata eriri katrij